सहरभित्र खोलाको वितण्डाः किन सोस्न छाड्यो काठमाडौंले पानी ? - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सहरभित्र खोलाको वितण्डाः किन सोस्न छाड्यो काठमाडौंले पानी ?
काठमाडाै‌ साउन ३१
डुबानमा परेको काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्र।
विगतका वर्षायाममा अविरल वर्षा भए पनि अहिले जसरी उपत्यकाका बस्ती डुबानमा पर्दैनथ्यो। पर्याप्त जंगल तथा खुला ठाउँ भएकाले आकाशेपानी सोस्थ्यो ।
नदीवरपर पनि सहज ढंगले पानी बग्थ्यो। तर, पछिल्लो एक दशकयता काठमाडौंमा अत्यधिक घर तथा सडक बनेपछि यहाँको जमिनले आकाशबाट परेको पानी सोस्न छाडेको छ। त्यसैले डुबानको समस्या देखिन थालेको हो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा हिमाल लम्सालले लेखेका छन्।
कंक्रिट संरचनाले मात्रै होइन, खोलाकिनारामा खुला स्थान अतिक्रमण गरेर बनाएका सडक तथा पुलका कारण पनि बस्ती डुबानमा पर्न थालेका छन्।
‘पहिला काठमाडौंमा पर्याप्त जंगल थियो, आकाशेपानी जमिनले सहजै सोस्थ्यो,’ संंस्कृतविद् सत्यमोहन जोशीले भने, ‘पहिला त नदीकिनारामा बस्ती हुँदैनथ्यो। त्यसैले बस्तीमा बाढीको समस्या आउँदैनथ्यो । खोलानाला स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो धार फेर्दै बग्थे।’
जोशीका अनुसार ५० वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा खोलानाला स्वतन्त्र रूपले बग्थे। घना बस्ती बस्दै गएपछि उपत्यकामा प्राकृतिक ढंगको निकास बन्द भयो।
‘पहिला पनि वर्षायाममा काठमाडौंमा मज्जाले पानी पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंका नदीनालाका पानी चोभारमा पुगेर दहमा परिणत हुन्थ्यो। त्यो बेला पातलो बस्ती भएकाले मानवीय क्षति हुँदैनथ्यो।’
जबरजस्ती ढंगले मानिसले खोलाको बहाव परिवर्तन गरेकाले उपत्यकामा डुबानको समस्या देखिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।
‘यसअघि पनि उपत्यकामा अत्यधिक वर्षा हुन्थ्यो । अहिले जस्तो भीषण वर्षा हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक ढंगले कंक्रिटको संरचना ठडाएकाले आकाशेपानी सोस्न नपाएर बाढीले रौद्र रूप देखाएको हो।’
काठमाडौं उपत्यकामा अधिकांश नदी आसपास खाली ठाउँ भेट्नै मुस्किल पर्छ। प्राचीन राजकुलो र नदी क्षेत्रको अतिक्रमणका कारणले बाढीको समस्या उब्जिएको हो।
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य उपत्यकामा अव्यवस्थित कंक्रिट बस्तीका कारण प्राकृतिक रूपमा जमिनमुनि पानी सोस्ने क्रम घटेसँगैबस्तीमा डुबानको समस्या देखिएको बताउँछन्।
बुधबार बिहानपख काठमाडौंको बागमती, विष्णुमती, टुकुचा, धोबीखोला, च्यानेखोलालगायतमा आएको बाढीले वितण्डा मच्चायो। तीनकुने, अनामनगर, घट्टेकुलो, शान्तिनगर, थापाथलीलगायत क्षेत्र डुबानमा परे।
खोला किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासी र अन्य स्थानीयका घरटहरा डुबे। हिउँदयाममा सुक्खा देखिने काठमाडौंका खोलाको पानी करिडोर पार गर्दै घरभित्रै छिरेपछि स्थानीय त्रसित बने। भुइँतलामा पानी पसेपछि स्थानीयले प्रहरी र जनप्रतिनिधि गुहारे।
बाढीले मानवीय क्षति नभए पनि सरसामानमा क्षति पुगेको छ। ‘राति सुतिरहेका थियौं, एक्कासि कोठामा पानी पस्यो, डेरामा भएको खानेकुरा सबै भिज्यो,’ देवीनगर बस्ने कुमार राईले भने।
काठमाडौं महानगरपालिका–३१ वडाका वडाध्यक्ष नारायण भण्डारीले बागमती पुल र नदी अतिक्रमणका कारण बाढी आएको बताए।
उनले खोलाले ओगटेको जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिका कारण उपत्यकाका खोलाले ठूलो वितण्डा ल्याउन सक्ने बताए। ‘सबैतिर नदी ओगट्ने र संरचना बनाउने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई पुरानै अवस्थामा पु¥याउन सकिएन भने भविष्यमा ठूलो विनाश नल्याउला भन्न सकिन्न।’
उनका अनुसार वडा ३१ का ६० भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। तीनकुनेस्थित बागमती खोलामा पुल बनाउँदा नदीको क्षेत्रफल साँघुरो पारिएको वडा कार्यालयको निष्कर्ष छ।
प्रकाशित ३१ साउन २०७५, बिहिबार | 2018-08-16 07:18:58
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोवडी जहाज चार्टर गरिने भएको छ।
केन्द्रमा पार्टी एकता गरेको ११ महिनापछि नेकपाले ७७ वटा जिल्लाको नेतृत्व टुंगो लगाएको छ।